Oge Acrylic Mara Mma Na-achịkọta Akwụkwọ akụkọ na RSS | Martech Zone
Oge Acrylic Na-agbazi Akwụkwọ Akụkọ na RSS
Friday, May 1, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Douglas Karr
Enyi m bụ́ Bill kpọbatara m MacHeist nwa oge azụ. MacHeist bu ihe di oke nma - ha tinyere otutu ngwa maka Mac ị nwere ike zụta na mbelata ego di elu. Ọ bụrụ na ndị mmadụ zuru ma zụta oke ego maka ọrụ ebere, ha na-eweta ọ bụla ndị na-azụ ihe ikike maka ngwa niile na ngwugwu niile.
Ọ bụ atụmatụ aghụghọ dị egwu ebe ọ bụ na ọ na-enye ndị sonyere nsogbu ka ha gaa gwọọ, kwalite ngwungwu ahụ, ma chọọ ndị folks ọzọ ịzụta!
MacHeist 3 ka mechara ma nwee ụfọdụ ngwa dị egwu na ya. Mgbasa ozi ahụ gara nke ọma ma etinyere ngwa niile ahụ. Otu n'ime ngwa bụ Acryli pulp, ngwa adọrọ adọrọ maka ijikwa ma gụọ faili RSS gị. Ihe niile banyere ngwa ahụ pụrụ iche - ọ naghị eji ihe nlele ọ bụla nke igodo ụzọ ma ọ bụ jiri ya ochie ike gwụrụ usoro ụzọ. N'ime sekọnd ole na ole ị na-enwe ike chepụta ya… ọ bụ nnọọ kensinammuo.
Tags: acrylic pulp acrylic ngwaoge acrylicndepụta agụmacheist
Vidio: Twitter na Ndụ n'ezie
Outliers: Akụkọ nke Successga nke Ọma